သငျသညျ Analytics နှင့်အတူရုန်းကန်တစ်ခုတည်းသောမဟုတ်ပါဘူး | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, အောက်တိုဘာလ 6, 2014 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 5, 2014 Douglas Karr
ငါတို့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏အဓိပ္ပါယ် အဖြစ်ကောင်းစွာအွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားလုံးထဲကစာရင်းဝင် analytics သင်၏စျေးကွက်မဟာဗျူဟာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာရာတွင်ကူညီရန်သင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ သငျသညျအောကျကိန်းဂဏန်းများအချို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, စျေးကွက်သူတို့ရဲ့နှင့်အတူရုန်းကန်ဆက်လက် analytics ရွေးချယ်မှုများနှင့်ရလဒ်များ။ ငါသည်ဤ၏အဓိကသော့ကြောင်းယုံကြည်ကြသည် analytics ပိုမိုမကြာခဏဖြေရှင်းချက်များအတွက်မည်သည့်အကြံပြုချက်များပေးခြင်းမရှိဘဲ, သတင်းအချက်အလက်တစ်တန်ပေးပါသည်။
As analytics ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ပိုမိုအဆင့်မြင့်လာပြီးအချက်အလက်အားလုံး၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရန်ခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုဟုထင်ရသည်။ သို့သော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်သူတို့၏စျေးကွက်ရည်မှန်းချက်များနှင့်မည်သို့အောင်မြင်မှုရရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတိုင်းတာရန်လိုအပ်သည်၊ မှတစ်ဆင့် အဓိက
ဤတွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှိပါတယ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး analytics စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်စာရင်းအင်းများ
သူတို့သုံးစွဲသည်ကို CMOs မှအစီရင်ခံသည် သူတို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်၏ 8% စျေးကွက်ရှာဖွေရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ်။
2015 အသုံးပြုပုံစျေးကွက်ရှာဖွေရေး analytics အသုံးစရိတ် ၆၀% တိုးမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်.
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဒီဂျစ်တယ်လမ်းကြောင်း ၄ ခုကျော်ကိုပေါင်းစပ်ထားသော Lead Management Campaigns ချန်နယ်တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ် dual channel သည် ၃၀၀% ထက်ပိုများသည်။.
ကြီးမားသောရှုပ်ထွေးသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့အစည်း၏ ၄၀% သည်aအရှိန်အဟုန် - အလွှာချဉ်းကပ်မှု ဘက်ပေါင်းစုံစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရန်။
စျေးကွက်၏ ၆၀% သည်၎င်းတို့တွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ရွေးချယ်စရာများကိုရှာဖွေနေကြသည် လူမှုမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု tools များ.
ကုမ္ပဏီအားလုံး၏တစ်ဝက် ထိရောက်စွာသတင်းအချက်အလက်ဖမ်းယူခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ရုန်းကန် မျိုးစုံလူမှုမီဒီယာလိုင်းများမှ။
နောက်ဆုံးကလစ်နှိပ်ပါ attribution လူမှုမီဒီယာရလဒ်များအတွက်အသုံးအများဆုံးတိုင်းတာခြင်းမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။
Tags: ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရွေးချယ်စရာanalyticsခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဘတ်ဂျက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစာရင်းဇယားထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအစီရင်ခံစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးခြေရာခံနောက်ဆုံးကလစ်နှိပ်ပါ attributionစျေးကွက်ရှာဖွေရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစာရင်းဇယား